पेट दुखेको छ ? पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्..... - Health Today Nepal
पेट दुखेको छ ? पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्…..
August 27th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
गलत खानपिन र तनावका कारण पेट खराबी आउँछ । यसको खराब असर हाम्रो पाचनप्रणालीमा पर्छ । यो समस्याबाट मुक्तिका लागि घरेलु उपाय नै भेटिन्छन् । दिनदिनै यी उपाय अपनाएर पाचनप्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ । यस्ता छन् उपायः–
–दुई गिलास पानीमा दुई चम्चा धनियाँको धूलो मिसाउनुस् । अब त्यसमा आधी चम्चा सुकेको अदुवाको धूलो हाल्नुस् । यो घोललाई मधुरो आगोमा पाँच मिनेटसम्म तताएर काँढा बनाउनुस् । तयार भएको काँढाको चार चार चम्चा बिहान र बेलुका पिउनुस् । पेट ठीक हुन्छ ।
–हरीतकी वा हरडको धूलो बिहानबेलुका महसँग लिने गर्नुस् । आधी आधी चम्चा ठूलो अलैंचीको धूलो र मिश्री मिसाएर बिहानबेलुका खाने गर्नुस् । दिनदिनै दुई चम्चा कागतीको रसमा तीन चिम्टी जाइफलको धूलो मिसाएर पिउनुस् । एक कप पानीमा एक एक चम्चा जीरा र सूप हालेर उमाल्नुस् । मनतातो भएपछि पिउनुस् ।
–दिनदिनै हींगको पानीमा कपडा भिजाएर नाइटोमा १५ देखि ३० मिनेट राख्नुस् । एक चौथाइ चम्चा सुकेको अदुवाको धूलो, एक चम्चा सूप र आधी चम्चा मिश्री मिसाएर दिनदिनै बिहान बेलुका खानुस् । दिनमा चारचोटि एक गिलास मनतातो पानी पिउनुस् ।
Previous article पतञ्जली योगपीठका आचार्य बालकृष्णलाई विष खुवाएको आशंका
Next article भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सबै प्रकारका रोगको शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध